जनकपुर : उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि रामजानकी अस्पतालले छाडिदिए अढाइ लाख
भदौ २२, २०७८, १०:०१ AM
जनकपुरधाम : एक दलित बच्चाको उपचार गर्दा भएको अढाई लाख रुपैयाँ जनकपुरधामस्थित राम जानकी अस्पतालले छाडिदिएको छ ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा पर्ने मझौराकी अमृतादेवी सदा भदौं २ गते जनकपुरधाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी थिइन् । तर बच्चाले साँस फेर्न नसक्ने भएपछि डाक्टरले अन्यत्र गर्न सुझाए । त्यसपछि भदौं ३ गते मध्यरातमा बच्चा लिएर अमृता राम जानकी अस्पताल पुगिन् । अस्पतालले भर्ना लिएर बच्चाको उपचार सुरु गर्यो ।
अस्प्तालका बालरोज विशेषज्ञ डा. हेमन्त शर्मा भन्छन्, ‘बच्चालाई साँस फेर्न गाहे भइरहेको थियो । बाँच्छन् भन्ने ग्यारेण्टी थिएन । यद्दपी हामीले रिस्क मोलेर उपचार सुरु गर्यौं र बच्चालाई बचायौं ।’
उनका अनुसार १९ दिन एनआइसियू, ७ दिन भेन्टिलेटर र ३ दिन सि–प्यापमा बच्चालाई राख्नुपरेको थियो । बच्चाको उपचार खर्च ६ दिन अगाडी नै करिब अढाई लाख रुपैयाँ भइसकेको थियो । तर अस्पताल प्रशासनले रुपैयाँ मागेपछि बच्चालाई छाडेर सबै घर गइहाले । त्यसपछि बाध्य भएर पैसा नलिने भन्दै बच्चा लग्न भनेपछि उनीहरु फर्केर आयो ।
‘गरिबीका कारण उपचार खर्च जुटाउन घर गएका थियौं’, बच्चाको नातामा सानी आमा पर्ने रितादेवी सदाले भनिन्, ‘तर पैसा ऋण पनि पाइएन । अस्पतालबाट फोन गर्दा रुपैया तिर्न नसक्ने भनेको थिए । अनी डाक्टरले रुपैया नलाग्ने भनेपछि बच्चा लिन आएको छु ।’
अमृताका श्रीमान ओपि सदा बेरोजगार छन् । गाउँघरमै मजदुरी गरेर उनी परिवार पाल्छन् । उनको आफ्नै जग्गा समेत छैन । ‘खान त पुग्दैन, अस्पताललाई कसरी त्यति रुपैया तिर्न सक्छु’, उनले भनिन्, ‘अस्पतालले पीडा बुझेर छोराको निःशुल्क उपचार गरिदियो । डाक्टरलाई धन्यवाद दिन्छु ।’
लहानको जिनिस अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाहीले बच्चाको मृत्यू !
मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको तलब सुविधा रोक्न अदालतको आदेश